Cameroon: Guddiga Isku-xirnaanta Biliska ayaa ku celinaya hadafkiisa, dhiirigelinta wada noolaanshaha. - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » kale Cameroon: Guddiga Isku-xirnaanta Biliska ayaa ku celinaya hadafkiisa, dhiirigelinta wada noolaanshaha.
Khamiis, 11 April April 2019, Guddiga Qaran ee Laba-luqad-yaqaannimada iyo Dhaqannada-dhaqamada kala duwan ayaa abaabulay shir ay ku leeyihiin Yaoundé, oo diiradda saaraya wada noolaanshaha.
Gudoomiyaha guddiga Peter Mafany Musonge, oo ah gudoomiyaha guddiga, khabiiro ku sugan berriga ayaa cadeeyeen waxyaabaha ay u badan tahay in ay kor u qaadaan nolosha iyo dagaalka ka dhanka ah nacaybka naceybka u dhaxeeya Cameroon.
Ka jawaabista makarafoonka CRTV, Peter Mafany Musonge, wuxuu ugu baaqay Camerooniyiinta in ay noqdaan kuwo qaan gaar ah marka ay timaaddo isticmaalka shabakadaha bulshada. Waxa uu sidoo kale ku booriyay dadweynaha in ay ka fogaadaan macluumaadka la xariiro.
Waxaa ka xumaanaya fiidiyowyada xnxx, xvideos iyo goobo kale oo guulo leh, waxay ku riyoodaan "porno anshax": "Mums Make Porn"